Nezvedu - Hebei Ewin Enterprise Co, Ltd.
Vegetable / Grocery Mabhegi
Riratidze Chinyorwa Bhegi
HEBEI EWIN ENTERPRISE CO., LTDyakavambwa muna 2003, Muridzi: ave anopfuura makore makumi maviri nemasere 'ruzivo mumabhegi. Chikuru chekubata muThegi bhegi, Kurudzira uye zvipo zvezvipo. Iyo Kambani yanga ichikura nekukurumidza uye kusimbisa zvichiramba, uye ikozvino ndiyo yese-zvinhu zvinopa mukwikwidzi kune vatengi vanobva kuEurope uye USA
Mune izvi nemamwe mabhuku edu, zvinhu zvese zvinogona kugadzirwa kuti zviise yako kambani logo uye mota. Isu tinopawo OEM zvinhu kana zvinhu kune yako dhizaini. Isu takanaka pakuchengeta yekutumira hurongwa uye hwemhando kutonga, uye yakanaka mutengo zvakare.
PaEwin, isu tinopa pachena kubvunzana, isu tinokwanisa kuraira pane zvese zvigadzirwa, kutumira uye bhajeti zvinhu zvezvirongwa zvako. Isu tine chinangwa chekupa kana kukutsvagira akakodzera akakodzera vagadziri ane ekutanga mhando zvigadzirwa, kurudyi nguva yekutendeuka uye mitengo yakawanda yemakwikwi inoenderana chaizvo nezvinodiwa zvako wega.
Isu tinogara tiri parutivi rwenyu kuti muve nechokwadi chekuti Muchawana Zvamakarongeka.